Ogaden News Agency (ONA) – Al-Asad oo Sunta Kiimikada U Adeegsada Shacabka Suuriya.
Al-Asad oo Sunta Kiimikada U Adeegsada Shacabka Suuriya.
Waxaa isa soo tareysa cambaareynta Beesha Caalamka ee ku aadan maamulka Bashar Al Assad oo ciidamadiisa la sheegay inay hubka kiimikalka u adeegsadeen deegaanka Douma oo kamid ah dhulka Bariga-Quta ay ku sugan yihiin xoogaga mucaaridka ee ka dagaalamaya duleedka caasimada Dimishiq.
Ciidamada Al Assad oo ku hareeraysan deegaankaasi ayaa la sheegay inay ku duqeeyeen xaafadaha Douma hubka caalamka ka mamnuuca ah ee kimikalka Sabtidii lasoo dhaafay, tirada shacabka ku dhintay weerarkan ayaa la sheegay inay ka badan tahay 85 qof.
Dowlada Suuriya ayaa horey marar badan u adeegsaday hubka dunnida ka caagan ee kimikalka walow aysan jirin tilaabooyin adag oo ay Beesha Caalamka qaadeen maamulkaasi oo taageero ka helaya Dowlada Ruushka oo codka VETO ku leh golaha Amaanka.
Madaxweynaha Maraykanka Trump iyo Hogaamiyaha France Macron ayaa cambaareeyey weerarkan ugu danbeeyey, labadaasi dal ayaa horey u sheegay inay tilaabooyin ka qaadi doonaan xukuumada Suuriya hadii ay adeegsato hubkan.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan deg deg ah shalay ka yeeshay weerarkan ka dhacay deegaanka Douma, balse Ruushka oo golahaasi awood kuleh ayaa horey u horjoogsaday g’aamo la doonayey in laga soo saaro dowlada Suuriya oo kamid ah xulafadooda.